Farmaajo oo ka degay Itoobiya xili Abiy uu doonayo xalinta xiisada Kenya
ADDIS ABABA, Ethiopia – Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa Axada maanta ah ka degay Addis Ababa, caasimadda Itoobiya, kadib socdaalkiisa magaaladda Makka ee xarunta Sacuudiga.
Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya, Abiy Axmed, oo garoonka kusoo dhaweeyay Farmaajo ayaa waxay xafiiskiisa ku yeesheen wadahadalo gaar ah, kaasi oo ay saxaafada dibad joog ka ahayd.
Xafiiska Abiy Axmed oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa wuxuu shaaca ka qaadey in dhinacyadda ay kawada hadleen xoojinta iskaashiga nabadda iyo amniga ee gobolka.
"Labada hogaamiye iyo marwada koowaad ee Soomaaliya ayaa kulanka kadib dhir ku beeray dhismaha," ayaa lagu yiri qoraalka oo ku qornaa luqadda Ingiriiska, lana soo raaciyey sawiradooda.
Safarka Farmaajo ee Itoobiya oo aanan lasii shaacin waxa uu kusoo beegmayaa iyadda oo xiisada diblumaasiyadeed ee dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ay meeshii ugu sareysa mareyso.
Sidoo kale waxa uu imaanayaa iyadda oo Abiy uu todobaadkaan ka dhawaajiyey in uu quudareenayo in uu u kala dab-qaado dowladaha deriska oo khilaafkooda daaran yahay dacwad dhanka badda ah.
Abiy ayaa intaasi raaciyey in hadii aan la qaboojin dhibaatada ka dhex-aloolsan labada waddan "ay saameyn tabban ku yeelaneyso Itoobiya iyo dalalka kale ee deriska la ah".
Madaxtooyadda dowladda Soomaaliya ilaa iyo haatan wax war ah kama aysan soo saarin booqashada degdega ah ee uu Farmaajo ku tegay dalkaasi aan badda lahayn.
Bishii Maaj ayay ahayd markii Farmaajo oo u socdaalay Itoobiya iyaddoo jirto xiisada Kenya ay wada safteen isaga iyo Abiy dhanka Nairobi, waxayna la kulmeen hogaamiyaha wadankaasi.
Su'aallo ayaa la iska waydiinayaa waxa uu noqon karo doorka dhex-dhaxaadineed ee Abiy kaasoo dalkiisa uu ku lug-yeeshay todobaadkii falal liddi ku ah qaranimada Soomaaliya wallow ay raali ka bixisay Ethiopia.
Kenya ayaa dooneysa in ay Muqdisho kasoo laabato dacwada ay u gudbisay maxkamada cadaaladda aduunka ee ICJ ku saabsan xuduud badeedka balse dowlada federaalka ah waxay horey ugu gacan-seyrtay dalabkaasi.
Madaxweyne Farmaajo oo u dhoofay Itoobiya
Soomaliya 27.01.2018. 19:07
Magaaladda Addis Ababa waxaa horey ugu sugnaa wafdi uu hoggaaminayey Wasiirka..
Farmaajo iyo Abiy Axmed oo ka degay magaaladda Nairobi
Soomaliya 05.03.2019. 21:53
Itoobiya oo u kala dab qaadeysa Soomaaliya iyo Kenya
Soomaliya 05.03.2019. 20:32
Itoobiya oo u baroor-diiqdey Jenaraalo shirqool lagu khaarijiyey
Afrika 25.06.2019. 13:09
Kulankii Farmaajo iyo Abiy oo lagu soo qaaday 2 qodob oo xasaasi ah
Soomaliya 05.03.2019. 15:24
Farmaajo oo gaarey Addis Ababa, lana kulmaya Abiy Ahmed
Soomaliya 05.03.2019. 13:07